ပယ်ရီပယ်ရီ ချစ်ကန်း – Pann Satt Lann Books
6 x 0.3 x 8.3 inches
ဝိုင်းမော်၊ 2019 ဖေဖော်ဝါရီလ (ပ-ကြိမ်)
ပယ်ရီပယ်ရီ ချစ်ကန်း အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု3ရှိပါသည်။
I have readapost on ပါပီယွန်’s Facebook page stating that he wants his readers to feel extremely open with him. Relaxed and comfortable inarun-of-the-mill tea shop you could find anywhere in Myanmar, he wants his readers to feel like we as readers are just casually listening to him reminiscing about the ups and downs, highs and lows he experienced asahuman being living in this unforgiving world. If one person has lived “a complete life” as Sayar Nyi Pu Lay puts it, it’s Sayar ပါပီယွန်. He doesn’t claim to be virtuous and free of vices nor does he state that he isaperson you should look up to. He isn’t shy to share his tendency to smoke and drink asateenager or as an adult nor is he embarrassed to be revealed the gambling exploits he pulled off asayouth. He isn’t trying to be an impeccable hero, instead he is showing us that he’s human and like all humans, vulnerability, sentimentality and flaws exist in his constitution, just like all of us. He establishesasense of trust in his readers, by allowing himself to be fully transparent to the judgmental eyes of the public, both inaconventional and literary sense. This is how I perceive the appeal that this man’s literature has on me.
Asastudent studying abroad, asalover of literature, and asahuman with weaknesses and flaws, it’s peculiar to say but I feel less lonely when I read his work. His words are like soothing poems telling me that you’re not alone in this, your not the only one going through this enigma called life, that your not the only one who been dealt some bad hands, and that there’s always someone who has been dealt worse. Some of his stories are very bizarre and phenomenal and no doubt different from the experiences I had. However, this doesn’t restrict my ability to live through his story as him, as Maung ပါပီ and experience the emotions that coursed through his heart. Elements of his essays and stories struckachord with me because throughout my own journey I have felt what he felt, read what he read and experienced what he experienced. Of course, when one was to gingerly compare and contrast, the minute details are withoutadoubt different from our own stories. We all live different lives and it’s impossible for one person’s life to be completely the same as another’s. Isn’t that what makes human life so interesting?
Stories like Peri Peri Chicken, The River of No Returns, My Little Photographer, A Masquerading Robot, Joy King Takeaway and Goodbye Mary are my absolute favorites. Each feels like it has been plucked fromadelicate place in his consciousness. A deep, dark room he calls his past. As he would say, it made me feel like being born asahuman was worth it.
Movie-synopsis-like stories such as The Standing Man and The Lady With The Dog are cleverly articulated by interweaving his own interpretations and sentiments. Hilarious tales like “Diving” Shwe Ba consistently putsasmile on my face.
Overall, I can’t express enough how much I love this short story collection. It has everything that I would want in literature and it came just at the right time too. Coincidentally I am starting an internship inasnow-filled country, far, far away from home, away from my friends, away from my family and away from the woman I love. It’s safe to say that when you work long hours inaplace like that loneliness creeps behind your back likeashadow. Peri Peri Chicken was the first book I read since I got here. This book gave me strength. This book showed me that I’m not alone.
Thank you ပါပီယွန်. Here’s to many more wonderful books like this in the future, empowering young people like me.
ပယ်ရီ ပယ်ရီ ချစ်ကန်း
ဆရာပါပီယွန် ရေးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ “ဇီးကွက်ချောင်းတံတားပေါ်က အဝါရောင်ဝက်ဝံရုပ် အကျိုးအပဲ့လေး”ကို ပထမဆုံးဖတ်ဖူးတာပါ။အခုစာညွှန်းရေးမယ့် “ပယ်ရီ ပယ်ရီ ချစ်ကန်း”ကတော့ ဒုတိယမြောက်ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ပါ။ဇီး‌ကွက်ချောင်းတံတား ကိုဖတ်တုန်းက ရင်ထဲမှာဟာတာတာကြီး ကျန်ခဲ့တဲ့အတွက် ပယ်ရီ ပယ်ရီ ကိုလည်း ရင်ထဲမှာဟာတာတာကြီးကျန်ခဲ့မှာ ကြောက်လို့မဖတ်ခဲ့ပေမယ့် ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မဖတ်မိလေခြင်းဆိုပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်အပြစ်တင်မိသွားတယ်။
?ပယ်ရီ ပယ်ရီ ချစ်ကန်း
ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေ အများကြီးကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖတ်ရှုရမှာပါ။”ပယ်ရီ ပယ်ရီ ချစ်ကန်း” ဆိုတာကလည်း ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတစ်ခုပါ။ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေက စာရေးသူ ဆရာပါပီယွန်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းဆိုရင်လည်း မမှားပေ။
?ပယ်ရီ ပယ်ရီ ချစ်ကန်း ဆိုတာဘာလဲ….။
စာအုပ် စဖတ်တော့ ခေါင်းစဉ်ကထူးဆန်းတယ်။ဘာကိုပြောချင်တာလဲ ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ဖတ်ရင်းနဲ့ “ပယ်ရီ ပယ်ရီ ချစ်ကန်း”ခေါင်းစဉ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့…
“ပယ်ရီ ပယ်ရီ ချစ်ကန်း”ဆိုတာက ပီဇာ အမျိုးအစားတစ်ခု။ပယ်ရီ ပယ်ရီ အမျိုးအစားကြက်သား၊ငရုတ်ပွအစိမ်း၊ချိစ် မပါတဲ့ ပီဇာပါ။အဓိကဇာတ်ကောင် မောင်ပါပီ ပီဇာဆိုင်မှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်ခဲ့စဉ်က မယ်ဒီဆိုတဲ့ ကောင်မလေးအမြဲစားတဲ့ ပီဇာပါ။
?ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တာက စာအုပ်၃အုပ်လောက်ဖတ်တာနဲ့ညီတယ်လို့ ကျွန်မကတော့ထင်တယ်။စာရေးသူ ဆရာက ပညာလည်းစုံ၊ဘဝလည်းစုံ၊ဖတ်ရှုတဲ့ အခါခံစားရတဲ့ ရသကလည်းစုံတယ်၊ဗဟုသုတလည်းစုံသလို ယူတတ်ရင်ပညာတွေလည်း အစုံပေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။
?ကျွန်မတို့လူငယ်အများစုက နိုင်ငံခြားကိုအထင်ကြီးကြတယ်။နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းတက်ချင်တယ်၊ပညာတွေ ဆည်းပူးချင်တယ် အစရှိတာတွေကို လွယ်လွယ်ဘဲတွေးတတ်ကြတယ်။ဒါပေမယ့် မောင်ပါပီ တစ်ယောက် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာဆည်းပူးဖို့ရန် ရုန်းကန်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ ကျောင်းလခသွင်းဖို့ မနားမနေအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေလုပ်ရတာတွေ၊သူများတကာအိပ်ချိန်ရောက်မှ စာလုပ်ရတာတွေ စတဲ့အခက်အခဲတွေက ကိုယ်တိုင်ခံစားရသလိုပါဘဲ။မောင်ပါပီရဲ့ဒုက္ခတွေ၊အခက်အခဲတွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ငါသာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီး တွေးပူနေရပါတယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။စာရေးသူဆရာက သူကြည့်ဖူးတဲ့ရုပ်ရှင်”The Reader”အကြောင်းရေးထားတာပါ။ကျွန်မကတော့ အဲ့အကြောင်းကို ဘာသာပြန်စာအုပ်အ‌နေနဲ့ဖတ်ဖူးတာပါ။အဲ့စာအုပ် ဖတ်တုန်းကတော့ သိပ်ပြီးနားမလည်ချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာ့ထင်မြင်ချက်၊ ယူဆချက်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှ ကောင်းကောင်းနားလည်သွားတော့တယ်။ကျွန်တို့ရှင်သန်နေထိုင်နေတယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလို့ ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လာပါတယ်။
“မတ်မတ်ရပ်တဲ့သူ”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ခွဲကို ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ရှေ့နေဂျိမ်းစ် ဒိုနိုဗန် နဲ့ ရူးဒေါ့ဖ်အေဘယ်လ် တို့ရဲ့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာအတွက် မတ်မတ်ရပ်ရဲတဲ့သတ္တိ အစရှိတာတွေကို လေးစားဖွယ်တွေ့ရပါတယ်။ကိုယ်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်မှာ ရပ်တည်ပေးတဲ့သူ၊ စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကို တန်ဖိုးထားသင့်တယ်လို့ ကျွန်မတော့ထင်မြင်မိပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာ ကလည်းရုပ်ရှင်အကြောင်းပါ။ကိုယ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေး အဆင်ပြေဖို့အတွက် သူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုတောင်ရောင်းစားပစ်တဲ့ ကောင်လေး။သူတို့နှစ်ယောက်က စကားတောင်ကောင်းကောင်းမပြောဖူးပေ။နောက်ဆုံး ‌ကောင်မလေးရဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေကို ကောင်လေးကကောက်ပေးရင်း ကောင်မလေးရဲ့အကြည့်တစ်ချက်မှာတင် အဲ့ကောင်လေးကိုချစ်ကြောင်းဖော်ပြသွားတာတဲ့။သိပ်လှတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ဒီအကြောင်းလေးကို ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်မနားလည်လိုက်တာက ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ပြီးပြောမှ၊အမြဲတမ်းတွေ့နေမှမဟုတ်ပါဘူး။ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေ အတူတူကောက်ဖူးတာကလည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖြစ်ပေါ်‌စေတယ်ဆိုတာပါဘဲ။
?ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေများသလို ခံစားရတဲ့ရသ ကလည်း အမျိုးမျိုးပါဘဲ။classical ဂီတအကြောင်းလည်းပါသလို၊ဂီတအ‌ပေါ် စာရေးသူရဲ့ရူးသွပ်မှု၊စာရေးသူ ‌ခြောက်တန်းတက်စဉ်က အသုဘအိမ်မှာဖဲလိုက်ရိုက်တဲ့အကြောင်း၊အဖွားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်က မြေးဖဲရိုက်ဖို့ ပိုက်ဆံပေးတဲ့အကြောင်း၊လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို ဟာသလေးတွေပါထည့်‌ရေးထားတဲ့အတွက် ဖတ်ရတာလည်း မငြီး‌ငွေ့ပါဘူး။နောက်ပြီး ဇီးကွက်ချောင်းတံတားမှာတုန်းက သိပ္ပံပညာရှင်မလေး ဒေါ်နန်းမေမေကြည် နောက်ပိုင်းအိမ်ထောင်ပြုသွားတယ်ဆိုတာဘဲသိခဲ့တာ။ထမင်းရောင်းတဲ့သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အကြောင်းကို‌တော့ ပယ်ရီ ပယ်ရီ စာအုပ်ထဲမှာမှသိရတာပါ။
?”ပယ်ရီ ပယ်ရီ ချစ်ကန်း” ကဖတ်ရကျိုးနပ်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ဆရာ့‌လေသံနဲ့ပြောရရင် ပယ်ရီ ပယ်ရီ စာအုပ်ကို ဖတ်ရတာ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်တာပေါ့။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ဗဟုသုတ အစုံရစေသလို အခြားသောစာအုပ်တွေနဲ့ မတူညီတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုလည်းပေးစွမ်းထားတဲ့အတွက် စာဖတ်သူတွေကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း “ပယ်ရီ ပယ်ရီ ချစ်ကန်း” စာညွှန်းရေးသားခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ။
Amara (verified owner) – December 17, 2020
ပါပီယွန်စာအုပ်တွေဝယ်မိတိုင်း ငါတော့ ကော်ဖီတခွက်နဲ့ ထိုင်ဆွေးရဦးမယ့် ပုံပါပဲလို့ မဲ့ပြုံးပြုံးရင်း ဝယ်ခဲ့မိသော တစ်အုပ်…
ထေ့လုံးတွေ ဘာသာခြားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေပါတယ်…အတော်မိုက်ပါတယ် (ခံစားဖို့)
အမှာစာသိပ်ဖတ်လေ့မရှိပေမယ့် ဒီစာအုပ်မှာတော့ ဆရာညီပုလေး ရေးပေးထားတာမို့ ဖတ်ကြည့်မိပြီး အတော်ကို ကျေနပ်မိပါတယ်
နှလုံးသား သန်စွမ်းဖို့ ဂစ်တာတီးကျင့်ခဲ့တယ်
ခု ငါ စာသိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့ပါ
ခု ငါ ဂစ်တာကို အရူးအမူးမတီးတော့ပါ။
မနက်ဖန် အလေးမဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ
ငါ့ကြွက်သားတွေကို ညှစ်ထုတ်ပြနိုင်ဖို့ ။)
ဆံနွယ်ခက်ခက် အိပ်မက်ရနံ့ဟောင်း နှင့် ကိုသံချောင်းနှင့် နှစ်ပေါင်း၂၀